.Live ဗီဒီယိုအောက်မှာ နာမည်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ မအေးသောင်းကို အမျိုးမျိုးတွေစနောက်ပြီး ဆေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ ဗီဒီယို. – Askstyle
.Live ဗီဒီယိုအောက်မှာ နာမည်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ မအေးသောင်းကို အမျိုးမျိုးတွေစနောက်ပြီး ဆေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ ဗီဒီယို.
ျပည္သူခ်စ္အနုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတုိ့ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုယ္စီရရိွေနတဲ့ မင္းသားေခ်ာေတြပါပဲ။ မင္းသားေတြဆိုေပမယ့္ သီခ်င္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း ပါရမီရိွၾကတဲ့ ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတုိ့က ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) ဦးစီးတဲ့ နွင္းဆီအဖြဲ့ရဲ့ အဖြဲ့ဝင္ေတြဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတုိ့ ငါးေယာက္စလံုးကို တူညီတဲ့အခ်စ္ေတြနဲ့ခ်စ္ျပီး အားေပးေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မေန့က ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန့မွာလည္း ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတုိ့ နွင္းဆီညီအစ္ကိုေတြက သူတို့ရဲ့ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မယ့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေျပာဖို့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာကေန Live လႊင့္လာပါတယ္။ ထိုဗီဒီယိုေအာက္မွာ နိုင္ငံေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္ မေအးေသာင္းက သူမကို နာမည္ေခၚေပးဖို့ေျပာခဲ့ရာမွ ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတုိ့က မေအးေသာင္းကို နာမည္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚျပီး စေနာက္ခဲ့တာကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ေတြ့ရပါတယ္။
ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ထြန္းထြန္း၊ ရဲေလးနဲ့ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းတို့ကေတာ့ တူညီတဲ့ အနုပညာနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္ေနၾကသူေတြပီပီ အျပင္မွာလည္း တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ ေမာင္နွမလို သူငယ္ခ်င္းလို ခင္မင္ရင္းနွီးၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
Source: Stay At Home Entertainment’s fb
Live ဗီဒီယိုအောက်မှာ နာမည်ခေါ်ခိုင်းတဲ့ မအေးသောင်းကို အမျိုးမျိုးတွေစနောက်ပြီး ဆေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ ဗီဒီယို
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီရရှိနေတဲ့ မင်းသားချောတွေပါပဲ။ မင်းသားတွေဆိုပေမယ့် သီချင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ပါရမီရှိကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့က မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) ဦးစီးတဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပရိသတ်တွေကတော့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့ ငါးယောက်စလုံးကို တူညီတဲ့အချစ်တွေနဲ့ချစ်ပြီး အားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာလည်း နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့ နှင်းဆီညီအစ်ကိုတွေက သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ်ပြုလုပ်မယ့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြောဖို့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ Live လွှင့်လာပါတယ်။ ထိုဗီဒီယိုအောက်မှာ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် မအေးသောင်းက သူမကို နာမည်ခေါ်ပေးဖို့ပြောခဲ့ရာမှ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့က မအေးသောင်းကို နာမည်တွေအမျိုးမျိုးခေါ်ပြီး စနောက်ခဲ့တာကို အခုလိုမျိုးပဲ တွေ့ရပါတယ်။
နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်း၊ ရဲလေးနဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့ကတော့ တူညီတဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်နေကြသူတွေပီပီ အပြင်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မောင်နှမလို သူငယ်ချင်းလို ခင်မင်ရင်းနှီးကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။